Torohevitra momba ny tetikasa - Far East
Far East dia manolotra anao ny vahaolana feno momba ny Plant Fiber Pulp Molding Tableware Industry.
Ny asantsika dia manomboka amin'ny serivisy fa tsy mifarana amin'ny fivarotana milina.
Far East fitaovana & teknolojia fanondranana any amin'ny firenena 80 mahery.
Miara-miasa amin'ny mpanjifa maherin'ny 100 manerana izao tontolo izao.
Naorina tamin'ny 2013, Geogegrity EcoPack(Xiamen) Co., Ltd dia mihazakazaka 84sets an'ny andiany LD-12 Free Trimming Free Punching Energy Saving Oil Heating Automatic Machines, 42sets SD-P09 Free Trimming Free Punching Energy Saving Oil Heating Automatic Machines and 48sets an'ny DRY-2017 Energy Saving Oil Heating Semi Automatic Machines ao an-trano.Ny Output isan'andro dia mihoatra ny 120tons isan'andro.Iray amin'ireo mpanamboatra latabatra vita amin'ny pulp lehibe indrindra any Azia izy io.
Niorina tamin'ny taona 2017, Yash Papers Ltd dia mampiasa milina 7 LD-12-1850 Free Trimming Free Punching Energy Saving Oil Heating Automatic Machines ary 2sets SD-P09 Free Trimming Free Punching Energy Saving Oil Heating Automatic Machines avy aminay.Izy ireo no ozinina lehibe indrindra any India manana TPD 10, ankehitriny izy ireo dia mitady fanitarana ny fahaiza-manao miaraka amin'ny SD-P09 maimaim-poana maimaim-poana manangom-bokatra manangom-bokatra mamonjy menaka mandeha ho azy.